P7 အိတ်ဆောင် Pico စမတ် Android Wifi 1080P 4K TV 3D Mini Home Projector - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ င်ခြင်း | WoopShop®
P7 အိတ်ဆောင် Pico Smart Android Wifi 1080P 4K TV 3D Mini Home Projector
$257.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $428.99
မှစ. သင်္ဘောများ အီတလီ ပြင်သစ် အင်ဒိုနီးရှား ရုရှားပြည်ထောင်စု ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဘရာဇီး ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပိုလန် တရုတ်နိုင်ငံ ၾသစေတးလ် စပိန် ဂျာမနီ ဘယ်လ်ဂျီယမ်
အီတလီ / Update ကိုဗားရှင်း ပြင်သစ် / Update ကိုဗားရှင်း အင်ဒိုနီးရှား / Update ကိုဗားရှင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Update ဗားရှင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / Update ကိုဗားရှင်း ဘရာဇီး / Update ကိုဗားရှင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / အခြေခံဗားရှင်း ယူနိုက်တက်စတိတ် / အခြေခံဗားရှင်း ပိုလန် / အခြေခံဗားရှင်း တရုတ် / အခြေခံဗားရှင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အခြေခံဗားရှင်း သြစတြေးလျ / အခြေခံဗားရှင်း စပိန် / အခြေခံဗားရှင်း ဂျာမန် / အခြေခံဗားရှင်း ဘရာဇီး / အခြေခံဗားရှင်း အီတလီ / အခြေခံဗားရှင်း ပြင်သစ် / အခြေခံဗားရှင်း အင်ဒိုနီးရှား / အခြေခံဗားရှင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / Update ကိုဗားရှင်း ပိုလန် / Update ကိုဗားရှင်း တရုတ် / Update ကိုဗားရှင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / အခြေခံဗားရှင်း သြစတြေးလျ / Update ကိုဗားရှင်း စပိန် / Update ကိုဗားရှင်း ဂျာမန် / Update ကိုဗားရှင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ / Update ကိုဗားရှင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ / အခြေခံဗားရှင်း
P7 အိတ်ဆောင် Pico Smart Android Wifi 1080P 4K TV 3D Mini Home Projector - Italy / Update Version backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပြင်စကေး: 16: 10
Contrast အချိုး: 2000: 01: 00
အသုံးပြုခြင်း - ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းစက်
LED long long life 30000hrs: တစ်နေ့လျှင် ၅ နာရီအသုံးပြုပါက ၁၀ နှစ်ကျော်နိုင်သည်
အိတ်ဆောင်အရွယ်အစား - ရှိတယ်
အသုံးပြုမှု - ပါတီ၊ အိမ်၊ ဂိမ်း၊ လက်ဆောင်
ဥရောပ CE စံ: ဟုတ်ကဲ့
3D: အနီရောင်အပြာရောင် 3D
Built-in Smart နောက်ဆုံး Android 8.1 OS
Built-in ဘက်ထရီ၊ သက်တမ်းကြာသော ၂ နာရီ - ၃ နာရီ
ထိပ်တန်းအဆင့် Built-in Speaker
ဘာသာစကား ၁၄ ခု - အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ရုရှား၊ ရိုးရာ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ ချက်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အာရဗီ၊
Wifi Display - Multi-screen အတွက်စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ပံ့ပိုးမှုစင်တာ Multi-screen, Mirroring Screen, Miracast (android OS device အတွက်), Airplay (iOS device အတွက်)
Cool projector, အိမ်တွင်းကဇာတ်ရုံအဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ (ဓာတ်ပုံထဲမှာနိမ့်ဆုံးမြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်အရောင်တောက်ပနေတယ်)
သူတို့ကကျွန်တော့်ကို ၁၅ ရက်အတွင်းမှာ Balikesir ကိုပို့လိုက်တယ်။ 15try လိုပဲအကောက်ခွန်ကိုပေးရမယ်။ အစဉ်မပြတ်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ခရီးသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေရာတိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ကောင်းပြီ, Speaker အင်္ဂါရပ်မုတ်ဆိတ်ဖြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နံရံပေါ်မှာ, ကကြိုက်တယ်! မျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကွာအဝေး ၁ မီတာခွဲအကုန်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါလိမ့်မည်။ မီတာဖြင့်အရည်အသွေးနိမ့်သော်လည်းလျော့နည်းပါသည်။ သို့သော်ထိုငွေအတွက် TV ကောင်းကောင်း ၀ ယ်နိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရကပိုကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်စခန်းချနေထိုင်ရန်ဤအရာကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်သွားရန်နှင့်ရံဖန်ရံခါကြည့်ရှုရန်အတွက်သွားခြင်းမရှိတော့ပါ။
အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် Projector ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသယ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘက်ထရီအချိန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်သည်။ သို့သော်သေးငယ်သည့်အရွယ်သေးငယ်သည့်ကိရိယာမှမည်သည့်အရာများမျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။ ငါတကယ်ကြိုက်တယ် အလယ်အလတ်အရွယ်ရှိသောအခန်းအတွက်စပီကာသည်ကျယ်လွန်းသည်။ ပစ္စည်းပို့ရန်ပြီးဆုံးရန် ၂ လကြာသော်လည်းဟုတ်ပါသည်၊ နောက်ဆုံးတွင်လုံခြုံစွာရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကြံပြုထုတ်ကုန်!